ထရီဇာ မယ်ရီ မေ (အင်္ဂလိပ်: Theresa Mary May)(/təˈriːzə/; မွေးဖွားစဉ်နာမည် Brasier; ၁၉၅၆ အောက်တိုဘာ ၁ တွင်မွေးဖွား) သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ မေ သည် ၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၆အထိ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှစတင်ကာ ယခုအထိ (မေဒန်ဟက်ဒ်)ဒေသ Maidenhead တွင်ပါလီမန်အမတ်တစ်ဦးအဖြစ် ထမ်းဆောင်နေပေသည်။ နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်အားဖြင့် ထရီဇာ မေကို နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ဆာဗေးတစ်ဝါဒသမား (သို့) နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသားဝါဒ( one-nation conservative) အဖြစ်ခွဲခြားဖော်ပြကြသည်။
(1956-10-01) ၁ အောက်တိုဘာ၊ ၁၉၅၆ (အသက် ၆၃)
မေသည် အောက်စ်ဖို့ဒ်ရှိုင်းယား(Oxfordshire) တွင်ကြီးပြင်းခဲ့ပြီး အောက်စ်ဖို့ဒ်ရှိ St Hugh's College တွင်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင်ဘွဲ့ရရှိပြီးနောက် သူမသည်အင်္ဂလန်ဘဏ်နှင့် ဘဏ်အကောင့်၊ဘဏ်ကဒ် မှတဆင့်ငွေပေးချေမှုစီမံအဖွဲ့အစည်းတွင် (Association for Payment Clearing Services) အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူမသည် Merton ရှိ Durnsford အတွက်ကောင်စီဝင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အောက်လွှတ်တော်တွင် နှစ်ကြိမ်ခန့်လွှတ်တော်အမတ်ရွေးကောက်ခံရန်ကြိုးပမ်းခဲ့‌သော်လည်း မအောင်မြင်ပဲ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်မှ မေဒန်ဟက်ဒ်ဒေသတွင်အမတ်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင်မေလသည် အတိုက်အခံအစိုးရအဖွဲ့၏ ရာထူးတစ်ချို့တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သူမသည် ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၃ ခုနှစ်အထိကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ၏ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင်ညွန့်ပေါင်းအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်အခါ မေအား ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနှင့်အမျိုးသမီးများနှင့်တန်းတူညီမျှမှုဝန်ကြီး အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အမျိုးသမီးများနှင့်တန်းတူညီမျှမှုဝန်ကြီးရာထူး ကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီထပ်မံ အောင်မြင်မှုရခဲ့ပြီးသူမသည်နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်အတွင်း သက်တမ်းအရှည်ဆုံးသောပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူမ၏ရာထူးသက်တမ်းအတွင်း ရဲအဖွဲ့ချုပ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်၊ တင်းကြပ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးမူဝါဒကို‌ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ကာ ခက်အရွက်သုံးစွဲခြင်း (khat) [မှတ်စု ၁]ကိုပိတ်ပင်ခြင်း၊ ရဲနှင့်ရာဇဝတ်မှုကော်မရှင်နာများရွေးချယ်ခံမှုနှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ဆောင်ခြင်းကို မိတ်ဆက်သည်။ အကြမ်းဖက်သမား Abu Qatada အားပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခြင်း၊အမျိုးသားရာဇဝတ်မှုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအပေါ် ထပ်တိုးကန့်သတ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့၏ ။
ဒေးဗစ် ကင်မရွန်း နှုတ်ထွက်ပြီးနောက် မေသည်ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရွေးချယ်ခံရပြီး ဗြိတိန်၏ဒုတိယအမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာသည်။ သူမသည် ဥရောပသမဂ္ဂသဘောတူစာချုပ် အပိုဒ် ၅၀ကို စတင်အသုံးချကာ ယူကေကိုဥရောပသမဂ္ဂမှနှုတ်ထွက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို မတ်လ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂမှနှုတ်ထွက်ခြင်းစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတွင် သူမပါဝင်ရုပ်လုံးဖော်မည့် အခန်းကဏ္ဍပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်ရည်ရွယ်ချက်၊ သူမ၏ခိုင်မာတည်ငြိမ်သော ခေါင်းဆောင်မှုမီးမောင်းထိုးပြရန်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အတူ မေလတွင် ရှောင်တခင်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကို ၂၀၁၇ယူကေအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ၁၉၈၃ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှအစပြု၍ ဤပါတီသည်အမြင့်ဆုံးဆန္ဒမဲရရှိထားသောပါတီဖြစ်သော်လည်း ဤရွေးကောက်ပွဲသည် ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ၏လွှတ်တော်အမတ်နေရာ ၃၃၀ မှ ၃၁၇ သို့ကျဆင်းသွားစေသည်။ မဲအများစုဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်သူမသည် လူနည်းစုအစိုးရတစ်ရပ်ကို အယုံအကြည်ရှိ၍ထောက်ခံခြင်းသဘောတူညီမှု( confidence and supply arrangement )အရ [မှတ်စု ၂] Democratic Unionist Party (DUP)နှင့် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့ကာ လူနည်းစုအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့လေသည်။၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာလတွင် ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ၏နောက်တစ်ကြိမ်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာရွေးချယ်မှု(ကွန်ဆာဗေးတစ်အမတ်များမှအယုံအကြည်ကင်းမဲ့ခြင်းမဲ( vote of no confidence from Conservative MPs)) နှင့် ၂၀၁၉ဇန်နဝါရီလ မေ၏အစိုးရအဖွဲ့အပေါ် ပါလီမန်မှအယုံအကြည်ကင်းမဲ့ခြင်းမဲ( Parliamentary vote of no confidence)ပေးမှုများကို ကျော်ဖြတ်နိင်ခဲ့သည်။ ယူကေကိုဥရောပသမဂ္ဂမှနှုတ်ထွက်ရေးကို အကျိုးသက်‌ရောက်စေသော အစိုးရ၏စက္ကူဖြူအစီအစဉ် (သို့) Chequers Agreementသဘောတူညီချက်ကိုလုပ်ဆောင်ရင်း ဥရောပသမဂ္ဂနှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့၏ ။ ဤစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုသဘောတူညီချက်များကို ပါလီမန်ကသုံးကြိမ်ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးနောက် ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာသည်။ သို့သော် အောက်လွှတ်တော်၏ နောက်တန်းထိုင်ခုံနေရာတွင် ထိုင်သူအဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းလျှက်ရှိသည်။[မှတ်စု ၃]
မေ၏ အစောပိုင်းကာလများနှင့် လုပ်ငန်းပြင်ဆင်
ဆဆစ်(ခ်စ်)ခရိုင်(Sussex)၊ အိ(တ်စ်)ဘော(န်)မြို့(Eastbourne) ၁၉၅၆ အောက်တိုဘာ ၁ ၌မွေးဖွား၍ မေသည် ဇိုက်ဒီး မယ်ရီ(Zaidee Mary )နှင့် ဟျူးဘာ့တ် ဘရေးရှား((Hubert Brasier)တို့၏ တစ်ဦးတည်းသောသမီးဖြစ်သည်။ဖခင်မှာ အင်္ဂလန်ကျောင်းတော်ကြီး(Church of England) နှင့် (အန်ဂလိုကသလစ်)၏ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး(clergyman)ဖြစ်သည်။ မိခင်မှာ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ ထောက်ခံသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဖခင်သည် ကားမတော်တဆမှုမှရရှိသော ဒဏ်ရများဖြင့် ဆုံးပါး၍ မိခင်သည်လည်း နောက်တစ်နှစ်ဝယ် အာရုံကြောရောဂါဖြစ်သော (multiple sclerosis)ဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့၏ ။
အစောပိုင်း၌ ဟေးသရော့(ပ်) မူလတန်းကျောင်း(Heythrop Primary School)၊ ထို့နောက် ရိုမန်ကသလစ်ကျောင်းဖြစ်သော စိန့်ဂျူလီယန်နာ သာသနာပြုကျောင်းသို့ ၁၉၈၄တွင် တက်ရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ၁၃နှစ်တွင် အောက်စဖို့ဒ်ရှိုင်းယား၊ ဝိ(တ်)လေရှိ ယခင်ရှိဖူးသော ဟိုလ်တန်ပါ့ခ် မိန်းကလေးသဒ္ဒါကျောင်း (အစိုးရကျောင်း) သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်၊ စိန့်ဟျု့ကောလိပ်တွင် ပထဝီဝင်ဘာသာရပ်ကိုဆည်းပူး၍ ၁၉၇၇၌ ဒုတိယအဆင့်ဖြင့် BA (a second class degree)ဂုဏ်ထူးတန်းဝင်ခဲ့သည်။ အပိုမုန့်ဖိုးရရန် မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်းတွင် စနေနေ့များ၌ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၇-၁၉၈၃ အင်္ဂလန်ဘဏ်တွင်လည်းကောင်း၊ ၁၉၈၅-၁၉၉၇ (Association for Payment Clearing Services - APACS)တွင်လည်းကောင်း ဘဏ်ဏ္ဍာရေးအတိုင်ပင်ခံအဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့၏ ။ထိုအဖွဲ့စည်း၌ ၁၉၈၉မှ ၁၉၉၆ထိ ဥရောပရေးရာဌာန၊၁၉၉၆-၉၇ တွင် နိုင်ငံတကာအရေး အကြီးတန်းအကြံပေးအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့၏ ။ ဒန်စ်ဖော့ဒ်မြို့နယ် (Durnsford ward)အတွက် အတိုင်ပင်ခံဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုမြို့နယ်မှာ လန်ဒန်မာတန်ခရိုင်တွင်ရှိ၍ အတိုင်ပင်ခံရာထူး ၁၉၈၆-၁၉၉၄၊ ပညာရေးဥက္ကဋ္ဌ ၁၉၈၈-၉၀၊ အဖွဲ့ဒုခေါင်းဆောင် နှင့် Housing Spokesmanအဖြစ် ၁၉၉၂-၉၅ထိတာဝန်ယူခဲ့သည်။ ၁၉၉၂ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကွန်ဆာဗေးတစ်အမတ်လောင်းအဖြစ် ဒါဟမ်အနောက်မြောက်နယ်တွင်ယှဉ်ပြိုင်ရာ ရှုံးနိမ့်၍ ၁၉၉၄ ဘားကင်းနယ်ရွေးကောက်ပွဲ၌လည်း ထပ်မံရှုံးနိမ့်ပြန်သည်။ ၁၉၉၇အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ မေဒန်ဟက်ဒ်နယ်အတွက် ကွန်ဆာဗေးတစ်အမတ်လောင်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရကာ သူမမှာ ထိုနယ်တွင်အနိုင်ရခဲ့သော်လည်း  သူမ၏ ပါတီကားနှစ် ၁၅၀အတွင်း အဆိုးဝါးဆုံးရှုံးနိမ့်ခဲ့လေသည်။
၂၀၀၂ ဇူလိုင်တွင် ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီ၏ ပထမဆုံး အမျိုးသမီးဥက္ကဋ္ဌရာထူးရာရှိလာခဲ့ကာ ပါတီညီလာခံတွင် ပါတီကိုပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်ကြောင်း "လူတွေက ကျွန်မတို့ပါတီကို ဘာလို့ခေါ်လဲ သိကြလား၊ မနှစ်မြို့ဖွယ်ပါတီတဲ့"ဟု ပြောကြားရင်း သူမ၏ အမြင်ကို ရှင်းလင်းပြသခဲ့၏ ။  ၂၀၀၃၌ မိုက်ကယ် ဟိုးဝပ်ဒ် (Michael Howard) ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီနှင့် အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီး မေကို ပို့ဆောင်ရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နောက်ယောင်ခံဝန်ကြီး ခန့်အပ်ခဲ့လေသည်။ (မှတ်ချက် - ပါတီဥက္ကဋ္ဌ (chairman) နှင့် ပါတီ ခေါင်းဆောင်( leader) မတူကြောင်းသတိပြုပါ)  နောက်ယောင်ခံဝန်ကြီးများအဖြစ် ၂၀၀၄ - မိသားစုရေးရာဝန်ကြီး (Shadow Secretary of State for the Family)၊ ၂၀၀၅ - ယဉ်ကျေးမှု၊ပြန်ကြားရေး၊ အားကစားရေးရာ ဝန်ကြီး(Secretary of State for Culture, Media and Spor)၊ ၂၀၀၉ - အလုပ်သမားနှင့် ပင်စင်ရေးရာဝန်ကြီး(Secretary of State for Work and Pensions)အနေဖြင့် ထမ်းဆောင်ခဲ့လေသည်။
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနှင့်အပြိုင် အမျိုးသမီးများနှင့်တန်းတူညီမျှမှုဝန်ကြီးအဖြစ် ၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၂ စက်တင်ဘာထိထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် မာရီယာ မီလာ (Maria Miller)တက်ခဲ့သည်။ သူမကို ဤရာထူးခန့်အပ်သောကြောင့် LGBTအခွင့်အရေးလုပ်ရှားသူတစ်ချို့က ဝေဖန်ပြစ်တင်ကြ၏ ။ အကြောင်းမှာ သူမသည် ယခင်က ၁၉၉၈-အသက်ရွယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တူညီမှုရှိရေး သဘောတူညီချက်(equalising the age of consent)၊ ၂၀၀၂-လိင်တူအခွင့်အရေးလက်ခံကျင့်သုံးခြင်း(adoption rights for homosexual) စသည်တို့ကို ဆန့်ကျင်မဲပေးခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်၏ ။ သို့သော် ဥပဒေအရအသိအမှတ်ပြုထားသော လိင်တူစုံတွဲများအတွက် ထောက်ခံမဲပေးခဲ့လေ ၂၀၁၀ ဘီဘီစီ၏ မေးခွန်းမေးရန်အစီအစဉ်ကဏ္ဍ၌ မေသည် ဂေးများအပေါ်ထားသည့် သူမ၏ သဘောထားပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်းပြောကြားသွားခဲ့၏ ။ ၂၀၁၀ ဇူလိုင် ၂ ၌ မေသည် ယခင်ကဆန့်ကျင်ဖူးသော်လည်း ၂၀၁၀-တန်းတူညီမျှရေးအက်ဥပဒေမှ ပြီးခဲ့သောလေဘာအစိုးရ၏ အဆင့်တန်းခွဲခြားခြင်းကိုဆန့်ကျင်သည့် ဥပဒေများကို ထောက်ခံပါမည်ဟု ဆိုသွားသည်။ ထိုဥပဒေမှာ အောက်တိုဘာ ၁ တွင် အင်္ဂလန်၊ စကော့တလန် နှင့် ဝေလ နိုင်ငံများတွင် အသက်ဝင်ခဲ့၏ ။
ဥရောပ သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဆက်လက်ဖြစ်ရေး၊ မဖြစ်ရေးအတွက် ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ၌ မဲပေးသူ ၅၂% မှာ အီးယူမှထွက်ခွာရန်မဲပေးခဲ့သဖြင့် အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ဒေးဗစ် ကင်မရွန်း ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်၍ ၎င်းကိုအစားထိုးရန် ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီခေါင်းဆောင်အတွက် ယှဉ်ပြိုင်သူအဖြစ်ပ့ဝင်မည်ဟု ၂၀၁၆ ဇွန် ၃၀တွင် မေက ကြေငြာခဲ့သည်။ အီးယူမှထွက်ရှိခြင်းနှင့် မဆိုင်ပဲ သူမသည် ခိုင်မာသောခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်၊ တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက် အကောင်းဘက်ဆန်သောအမြင်များယူဆောင်ပေးနိုင်သာ်ဟု ပြောဆိုရင်း ပါတီအတွင်း စည်းလုံးခြင်းလိုအပ်မှုကို အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ မေက အီးယူအတွင်းဆက်လက်ရှိနေရေးကို မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့သော်လည်း ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဒုတိယလူထုဆန္ဒခံယူပွဲမရှိစေရဟု အခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်။ " ဒီလှုံ့ဆော်ရေးကို တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပြီးပြီ..... ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်း ပြည်သူက ပေးခဲ့ကြပြီးပြီ။ အီးယူမှာဆက်ရှိနေဖို့ ကြိုးပမ်းမှုတွေမရှိရတော့သလို နောက်ဖေးတံခါးပေါက်ကနေတဆင့် အီးယူထဲပြန်ဝင်ဖို့ကြိုးစားမှုလည်း မရှိရတော့ပါဘူး။ ဘရက်ဇစ်[မှတ်စု ၄] ဟာ ဘရက်ဇစ်ပါပဲ။" ထိုနေ့၏ အမြင်မဲဆန္ဒအရ ၄၇% မှာ မေအား ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဖို့အဘို့ငှာ ပါတီခေါင်းဆောင်လောင်းဖြစ်စေချင်ကြ၏ ။ ဒုတိယအကြိမ်မဲပေးရွေးချယ်မှု၌ မေ - ၁၉၉မဲ၊ အန်ဒရီး လက်ဒ်ဆန် (Leadsom) - ၈၄မဲ၊ မိုက်ကယ်ဂို့ဗ် (Gove)- ၄၆မဲရရှိ၍ ဂို့ဗ် ထွက်ရသည်။ ဇူလိုင် ၁၁ တွင် လက်ဒ်ဆန် ထိုပြိုင်ပွဲမှ နှုတ်ထွက်သဖြင့် တစ်ဦးတည်းကျန်ရှိသော မေမှာ ပါတီခေါင်ဆောင်ဖြစ်သွားသည်။ ပါတီခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး နှစ်ရက်အကြာ ၂၀၁၆ ဇူလိုင် ၁၃တွင် မေအား အဲလိဇဘတ်ဘုရင်မကြီးမှ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် မေမှာ ယခင်ဝန်ကြီးချုပ် သက်ချာပြီးလျှင် ဒုတိယမြောက် အမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာ၏ ။ အမှတ်(၁၀) ဒေါင်းနင်းလမ်း၌ ကမ္ဘာ့မီဒီယာများသို့ မိန့်ခွန်းပြောဆိုရာတွင် သူမသည် ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ရသည့်အတွက် ပြည်သူပြည်သားများအမှုထမ်း(honoured and humbled)ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားခဲ့၏ ။ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာသောအခါ နိုင်ငံ၏အရာရောက်ဆုံးရုံးကြီး (၄)ရုံး(Great Offices of State)[မှတ်စု ၅] မှ ၂ခုကို တာဝန်ယူရသော ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ခန့်အပ်အပြီး မိန့်ခွန်း၌ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီအမည်၌ရှိသော Unionistဆိုသည့်စကားလုံးမှာ အင်္ဂလန်၊စကော့တလန်၊ ဝေလ၊ မြောက်အိုင်ယာလန်တို့ကြား အဖိုးထိုက်သော သံယောဇဉ်ကြိုးတစ်မျှင်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေး၍ ပြေကြားခဲ့၏ ။ ဇူလိုင် ၁၅ရက်နေ့မတိုင်ခင်လောက်တွင် စကော့တလန်သို့ သွားခဲ့ပြီး စကော့တလန် ပထမဝန်ကြီး(First Minister)နှင့်တွေ့ဆုံ၍ စကော့ နှင့် ယူကေတစ်ခြားအပိုင်းများ၏ နှောင်ဖွဲ့မှုကို ပိုမိုအားဖြည့်ခိုင်မာစေရန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ "ကျွန်မ ဒီကိုလာခဲ့တာ နှစ်ရာစုပေါင်းများစွာ ကြာရှည်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ဒီထူးခြားတဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး အဓွန့်ရှည်ရပ်တည်ဖို့အတွက် ကျွန်မရဲ့ ကတိသစ္စာကိုပြသဖို့ပါပဲ။ "ဟူ၍ ရှင်းလင်းပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
အစိုးရအဖွဲ့ကိုအပြောင်းလဲများစွာပြုလုပ်ခဲ့၏ ။ ကင်မရွန်းအစိုးရအဖွဲ့မှ ဝန်ကြီးကိုးဦးကို ရာထူးမှအနားယူစေသည်။ အီးယူတွင် ဆက်ရှိရန် ထောက်ခံခဲ့သော်လည်း ထင်ရှားသော အီးယူခွဲထွက်ရေးသမားတစ်ချို့ကို ဥရောပ သမဂ္ဂမှယူကေခွဲထွက်ခြင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ရာထူးများတွင် တာဝန်ပေးခဲ့သည်။ ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် အား နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ဓနသဟာရနိုင်ငံရေးရာဝန်ကြီးနှင့် မေ၏ လက်ထက်တွင် အသစ်တီထွင်ထားသော ဝန်ကြီးနှစ်နေရာ၌ ဒေးဗစ်ဒ် ဒေးဗစ်(စ်)(David Davis)အား ဘရက်ဇစ်ရေးရာဝန်ကြီး၊ လီယန်ဖော့(က်စ်) (Liam Fox)အား နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး စသဖြင့် အသီးသီးခန့်အပ်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ် ခန့်အပ်မှုများမှာ အမ်ဘား ရပ်ဒ်(Amber Rudd)အား ပြည်ထဲရေး၊ ဖစ်လစ် ဟန်းမာ့န်ဒ်(Philip Hammond)အား ဘဏ္ဍရေးရာအဓိပတိခန့်အပ်ခဲ့လေသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့်တက်ရောက်လာ (၂၁-၁-၂၀၁၇)သောအခါ မေက ဇန်နဝါရီ ၂၇တွင် သမ္မတနှင့်တွေ့ရန်ရှိကြောင်း အိမ်ဖြူတော်မှ ကြေငြာခဲ့သည်။ ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ မေက ယူအက်စ်-ယူကေ ကုန်သွယ်ရေးတိုးမြှင့်ရန် စိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသခဲ့၏ ။ အမေရိကန်၏ နေတိုးတွင်ပါဝင်ပတ်သတ်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းရန်ဆန္ဒကိုလည်း အတည်ပြုခဲ့သည်။ မေက သမ္မတဒေါ်နယ် ထရမ့်အား ဘုရင်မကြီးဆီသို့ အလည်ပတ်ခရီးဖိတ်ခေါ်ခြင်းနှင့် သမ္မတ၏ ပြည်ပအကြမ်းဖက်သမားများဝင်ရောက်မှုကို တားဆီးသည့်အမိန့်အာဏာ Executive Order 13769 (နိုင်ငံရေးအရ Muslim ban ဟုသိကြသည်) ထုတ်ပြန်ခြင်းအတွက်ရှုတ်ချမှုမပြုသောကြောင့် ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည်။
​ဧပြီ ၁၈တွင် ရှောင်တခင်ရွေးကောက်ပွဲကို ဇွန်လ၌ကျင်းပရန် ပါလီမန်မဲတောင်းဆိုမည်ဟု ကြေငြာကာ နောင်လာမည့်နှစ်များအတွက် ဤသို့လုပ်ခြင်းသည် တစ်ခုတည်းသော သေချာခိုင်မာမှုကို အာမခံနိုင်မည့်နည်းလမ်းဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုရှောင်တခင်ရွေးကောက်ပွဲမှာ Fixed-term Parliaments Act 2011 အောက်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး မါလီမန်အမတ်များ၏ လိုအပ်မဲအရေအတွက် သုံးပုံနှစ်ပုံရရှိခဲ့လေသည်။
၂၀၁၇ ပါလီမန်ဖွင့်ပွဲအပြီး နှစ်ပတ်အတွင်း ယူကေ၌ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူးသော Contaminated blood scandalကို လူသိရှင်ကြား စစ်ဆေးရန်အမိန့်ပေးသည်။ အဓိက လူပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ဖြင့် ထိုစစ်ဆေးမှုမှာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ အကြီးမားဆုံးသော စစ်ဆေးမှုကြီးဖြစ်ပေသည်။ ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာတွင် ရခိုင်အရေးနှင့်ပတ်သတ်၍ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဝေဖန်သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ၂၀၁၇တွင် အီးယူထွက်ခွာရေးဥပဒေမူကြမ်းအပေါ် ကွန်ဆာဗေးတစ်ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ Stephen Hammondအပါအဝင် ကွန်ဆာဗေးတစ်အမတ် ၁၁ဦးမှာ မေအစိုးရကို ဆန့်ကျင်မဲပေးသဖြင့် ၃၀၉မဲ :၃၀၅မဲဖြင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့၏ ။ ရုရှားအား ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံတွင်အရေးပါသော နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများစသည်(international order) တို့ကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အတုအယောင်ဇာတ်လမ်းများလုပ်ရန် ၎င်း၏နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာများစေလွှတ်၍ သတင်းအချက်အလက်ကို လက်နက်သဖွယ်အသုံးချခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍ စွပ်စွဲသည်။ ၂၀၁၇ ဂျာမန်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရုရှားပါဝင်ပတ်သတ်နေမှုကို ဖော်ပြခဲ့၏ ။ ယင်းမတိုင်မီက ဂျာမန်အစိုးရအရာရှိများနှင့် လုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက ရုရှားပါဝင်နှောက်ယှက်မှု လုံးဝမရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ တရုတ်ပြည်အား လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မည်ဟု ကတိပေးသော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာက သူမ၏တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စကို ရှောင်ရှားခဲ့သည့်အတွက် ချီးမွန်းသွားခဲ့လေသည်။ ၂၀၁၈ မေတွင် တူရကီသမ္မတ၏ သုံးရက်ကြာခရီးစဉ်၌ မေက ဗြိတိန်သည် တူရကီနိုင်ငံ၏ မိတ်ဆွေရင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့၏ ။
ဒီဇင်ဘာ ၁၂ တွင် ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီမှ သူမ၏ခေါင်းဆောင်မှုအပေါ် အယုံကြည်မရှိခြင်းအဆို(motion of no confidence)ကို စတင်ရင်ဆိုင်ရခဲ့၏ ။ သို့သော် မဲ ၂၀၀:၁၇၇ဖြင့် နိုင်ခဲ့လေသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၇ အတိုက်အခံလေဘာခေါင်းဆောင် ဂျရမီး ကော်ဘင် (Jeremy Corbyn)မှ အောက်လွှတ်တော်တွင် သူမအား ဘရက်ဇစ်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အယုံကြည်မရှိခြင်းအဆို(motion of no confidence)ကို တင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီ ၁၅ ဘရက်ဇစ်ညှိနှိုင်းမှုမအောင်မြင်သဖြင့် ဂျရမီး ကော်ဘင်က၂၀၁၉တွင် အယုံကြည်မရှိအဆိုတင်ပြန်ရာ နောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းတွင် မဲခွဲ၏ ။ ထိုအဆိုသည် မဲ ၃၂၅ : ၃၀၆ ဖြင့် အရေးနိမ့်ခဲ့၏ ။
On 15 January 2019 သူမ၏ ဘရက်ဇစ်ညှိနှိုင်းမှုအပေးအယူကို အောက်လွှတ်တော်တွင် မဲခွဲရာ မေရှုံးနိမ့်၏ ။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ တွင် ၎င်းအစိုးရ၏ ဘရက်ဇစ်စေ့စပ်မှုနှငိ့ပတ်သတ်၍ပင် ထပ်မံမဲခွဲရာ ရှုံနိမ့်ပြန်သည်။ သူမ၏ အီးယူနှင့် နောက်ဆုံးအပေးအယူသဘောတူညီမှု၌လည်း တတိယအကြိမ်မြောက် လွှတ်တော်တွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့၏ ။ ၂၉ မတ်လ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းပေါ်တွင်မဟုတ်ပဲ အီးယူမှထွက်ခွာခြင်း ညှိနှိုင်းချက်ကို မဲ ၂၈၆ : ၃၄၄ ဖြင့် စတုတ္ထအကြိမ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။
၂၄ မေလ၌ သူမသည် ကွန်ဆာဗေးတစ်ခေါင်းဆောင်ရာထူးမှ ဇွန်လ ၇ရက်တွင်နှုတ်ထွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုသည်။ ဘုရင်မကြီးဆီသို့ ဇူလိုင် ၂၄တွင် နှုတ်ထွက်စာ ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဘောရစ် ဂျွန်ဆင် ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာ၏ ။
ဩဂုတ်လ ၃၀၊ ၂၀၁၈ တွင် နိုင်ဂျီးရီးယာနိုင်ငံ အဘူဂျာဂုဏ်ထူးဆောင် နိုင်ငံသားဆုချီးမြှင့်ခဲ့၏ ။
↑ ဘရက်(ခ်)ဇစ် Brexit သို့ Brixit (IPA /ˈbrɛksɪt, ˈbrɛɡzɪt/) အရှည်စကားလုံး - BRITISH Exit ( the withdrawal of the United Kingdom (UK) from the European Union (EU)) ဟု Br နှင့် Exit အသံကို ရောနှောခေါ်ဆိုသော ဝေါဟာရဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ ယူနိုက်တက်ကင်းဒန်းနိုင်ငံဥရောပ သမဂ္ဂမှ ထွက်ခွာခြင်း။
↑ (1973) A Guide to the Parish Church of St Mary the Virgin, Wheatley. Gloucester: British Pub. Co.. ISBN 978-0714009742။
↑ (2004) The International Who's Who. Europa Publications, 1114။
↑ Sullivan, Paul (2012). The Little Book of Oxfordshire. New York: History Press. ISBN 978-0-7524-8243-9။5July 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Knowles, Elizabeth (23 August 2007). Oxford Dictionary of Modern Quotations. Oxford: Oxford University Press, 217. ISBN 978-0-19-920895-1။
↑ Childs, Sarah (8 April 2008). Women and British Party Politics: Descriptive, Substantive and Symbolic Representation. Routledge, 21–22. ISBN 978-1-134-21157-9။
↑ https://www.obv.org.uk/info-centre/guide-democracy၊ ပထမခေါင်းစဉ် - parliament
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထရီဇာ_မေ&oldid=517278" မှ ရယူရန်
၂၇ မေ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၇ မေ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။